June 2, 2021 - ApannPyay Media
June 2, 2021 by ApannPyay Media
အာရုံကြောအားနည်းနေပြီဆိုတာ ပြသနေတဲ့လက္ခဏာ (၇) မျိုး လူ့ခန်ဓါကိုယျရဲ့အာရုံကွောစနဈဟာ တကိုယ်လုံးကိုဖြန့်ကြက်ထားတာမို့ အရမ်းကိုအရေးပါပါတယ်။ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကလည်း လှုပ်ရှားမှုကအစ ဦးနှောက်ဉာဏ်ရည်တွေအထိကို သက်ရောက်မှုကြီးမားတာမို့ အာရုံကြောစနစ်ကျန်းမာနေဖို့ လိုပါတယ်။အာရုံကြောအားနည်းနေပြီဆို လူက တကယ်ကိုပေါက်ကရတွေဖြစ်ပြီး အလုပ်လုပ်နိင်စွမ်းတွေထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။ အာရုံကြောအားနည်းရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေဖြစ်လာတတ်လဲ ထုံကျဉ်တာ ခြေတွေ၊လက်တွေ ထုံကျဉ်တာဖြစ်ဖူးတယ်မလား။ ရာသီဥတုအေးလို့လည်းမဟုတ်ပါဘဲ မကြာခဏ ထုံကျဉ်တာနေရခက်ပါတယ်။ဗီတာမင် B12 အားနည်းခြင်းက အာရုံကြောတွေကိုဖုံးအုပ်ပေးထားတဲ့ အကာအကွယ်အလွှာကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ Crohnsရောဂါ သို့မဟုတ် တခြားအူလမ်းကြောင်းရောဂါတွေကြောင့်လည်း ဗီတာမင်စုပ်ယူနိုင်စွမ်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပိုချမ်းတတ်တာ အရင်ကဆို မှုလောက်မှာမဟုတ်တဲ့ အအေးဓါတ်လောက်ကို အခုမှအရမ်းချမ်းတတ်နေတာမျိုး။ နည်းနည်းအေးတာနဲ့ ကိုယ်က ခိုက်ခိုက်တုန်နေတာမျိုး ခံစားရတယ်ဆိုသွေးအားနည်းနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းထဲမှာ B12 ဓါတ်မလုံလောက်လို့သွေးနီဥတွေ နည်းတာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို ခြေဖျား၊ လက်ဖျားတွေအေးစက်ပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်ပြီး ချမ်းတတ်တာပေါ့။ ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကမောက်ကမဖြစ်တာစိတ်ဓါတ်ကျတာ၊ အာရုံရှုပ်ထွေးတာ … Read more
ကျန်းမာရေးအတွက် ဟင်းနုနယ်ရွက်ဆေး တစ်ခွက် ဟင်းနုနယ်ပင်တို့ဟာ ဆောင်းဦးကာလမှ နွေလယ်အထိ ရရှိနိုင်သော ရာသီစာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပင် တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အစေ့မှ အပင်ပေါက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရေကို ကြိုက်နှစ်သက်သော အပင်အမျိုးအစား ဖြစ်သော်လည်းပဲ လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ ရေရရှိပါက အပင်ကြီးထွားမှုကို ဆုတ်ယုတ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဟင်းနုနယ် မျိုးရင်းလေးခုကို အရှေ့အာရှတွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပင်အဖြစ် စိုက်ပျိုးကြပါတယ်။ ၎င်းတို့မှာ Amaranthus cruenuts, A.blitum, A.dubius, A. tricalor တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့ ဟင်းနုနယ်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၆ဝ ခန့်ရှိရာ ပန်းများမှာ အစိမ်းရောင်၊ အဝါရောင်၊ အနီရောင် အမျိုးမျိုးရှိကြပြီး အချို့မျိုးစိတ်များမှာ ပန်းပွင့်ချိန်တွင် ပန်းခိုင်များ လွန်စွာလှပကြပါတယ်။ မြန်မာပြည် အလယ်ပိုုင်းတွင် ပန်းပွင့်အစိမ်းရောင်၊အဝါရောင်၊ အညိုရောင်ရှိသော ဟင်းနုနယ်မျိုးများကို တွေ့ရပါတယ်။ ဟင်းနုနယ်ဆူးပေါက် ယာမြေတို့၏ … Read more
အသားအရေလေး နုပျိုစိုပြေလှပနေစေဖို့ သဘာဝနည်းလမ်းကောင်း
အသားအရေလေး နုပျိုစိုပြေလှပနေစေဖို့ သဘာဝနည်းလမ်းကောင်း အုန်းဆီနဲ့ ဆား (သို့) သကြား အုန်းဆီဟာ သင့်အသားအရေကို ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပြီး သင့်အသားအရေကို စိုပြေစေပါတယ်။ ဆား (သို့) သကြား ဟာဆိုရင်လည်း ဆဲလ်သေတွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေကို ကြည်လင်စိုပြေစေပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်း အုန်းဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း ဆား (သို့) သကြား စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း ပြုလုပ်နည်း ခွက်အသေးတစ်လုံးထဲမှာ ပါဝင်ပစ္စည်းနှစ်မျိုးလုံးကိုထည့်ပြီး သေချာမွှေလိုက်ပါ။ ပြီးရင် မိတ်ကပ်ကိုသေချာဖျက်ပေးပြီး မျက်နှာသစ်ပါ။ ပြီးရင် အခုရောထားတာကို မျက်နှာပေါ်မှာ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပွတ်လိမ်းပေးပါ။ ၁၅ မိနစ်ကနေ မိနစ် ၂၀ ထိထားပြီး ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ဆေးချပေးလိုက်ပါ။တစ်ပတ်ကို ၂ ကြိမ် ၃ ကြိမ်လောက်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ညအိပ်ယာမဝင်ခင်လုပ်ပေးပါ။ … Read more
ဒူးနာခါးနာတဲ့ မိဘတွေအတွက် အကျိုးများမယ့် ဆေးနည်း (ယုံယုံကြည်ကြည်လုပ်ပါ) ဘဲဥကိုပွက်နေသော ရေနွေးအိုးထဲ့ကို ၂ မိနစ်ခန့်ပြုတ်လိုက်ပြီး ဆယ်ယူလိုက်ပါ ။ဆယ်ယူလိုက်သည့် ဘဲဥကို ပန်းကန်လုံးထဲ့ကို ဖောက်ထည့်လိုက်ပါ ။စားကောင်းစေရန် သကြားအနည်းငယ် သင် စားကောင်းစေလောက် သည့် အနေအထားသို့ထည့်ပြီး ခေါက်စားလိုက်ပါ ။ တခြားမည်သည် အရာမှ ရောစပ်ပြီး မစားရပါ ဘဲဥတလုံးကိုတော့ ကုန်အောင် စားရပါလိမ့်မည် ။တနေ့ကို ဘဲဥတလုံးကို ကုန်အောင်စားရပါလိမ့်မည် ။ ထိုနည်းအတိုင်း နေ့စဉ် ဘဲဥတလုံးစီ စားသုံးရမည်၊ အနည်းဆုံး မိမိအသက်၏ တဝက် အလုံးရေအထိ စားသုံးရမည် ။( ဥပမာ ) အသက် ၄၀-နှစ်ရှိလျှင် အနည်းဆုံး ဘဲဥ အလုံးရေ (၂၀ ) စားသုံးရမည် ။ ထိုထက် … Read more
ဝင်ငွေ မရှိတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ဟာ မပျံသန်းနိုင်တဲ့ ငှက်တစ်ကောင်နဲ့တူတယ် ဝင်ငွေမရှိတဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက်ဟာမပျံသန်းနိုင်တဲ့ ငှက်တစ်ကောင် နဲ့တူတယ်။ကောင်းကင်ကို ကြည့်ပြီး မျှော်လင့်နေရုံပဲ။အမြင့်ဆိုတာ သူမအတွက် အိပ်မက်တစ်ခုမျှသာ…အိမ်ထောင်ရှင် မိန်းမဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ် ဖက်တွယ်မက်မောနေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ဟာ အခန်းကျဉ်းလေး ထဲက မီးလုံးလေး တစ်ခုနဲ့တူတယ်။ ဖွင့်ခြင်း ပိတ်ခြင်း ခံနေရ တဲ့ သူ့အလင်းဟာကန့်သတ်နယ်မြေ တစ်ခုနဲ့တကယ်တော့ မိန်းမ တစ်ယောက်ဟာ အများနည်းတူ တောင်ပံဖြန့် ပျံသန်းနိုင်ရမယ်။ဘဝဆိုတာ မျှော်လင့် အိပ်မက်နေရုံနဲ့ တင်းတိမ် မနေသင့်ဘူး။မိသားစုအတွက် လွယ်အိတ်လို လူမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့။ မိန်းမတစ်ယောက် ဟာ နေမင်းလို ကိုယ်ပိုင်အလင်းလဲ ရှိသင့်တယ် နေ့အခါလုံလောက်တဲ့ အလင်းရောင်ကို ကြဲဖြန့်ရင်းညခင်းမှာလမင်းအတွက်လည်း မျှဝေ ထွန်းလင်းခွင့်ပေးရမယ်… Credit -လေးစားစွာဖြင့်-Yi #ဘဝမှစာမေဦး ဝင္ေငြ … Read more
ကုစားမရတဲ့ အကုသိုလ်မို့ မကျူးလွန်မိပါစေနဲ့
ကုစားမရတဲ့ အကုသိုလ်မို့ မကျူးလွန်မိပါစေနဲ့ မောင်အောင် ဘုရား… မင်း သက်ရှိဘုရားဆိုတာ သိရဲ့လားကွယ့်-? တပည့်တော် မသိပါဘူးဘုရား။ အိမ်း… လောကမှာ သက်ရှိဘုရားဆိုတာ ရှိတယ်ကွယ့်။ မင်းနားလည်အောင် ဘုန်းဘုန်းပြောပြမယ်နော်။ တင်ပါ့ဘုရား။ လူသားတိုင်းအတွက် သက်ရှိဘုရား တစ်ဆူရှိတယ် မောင်အောင်ရေ… တင်ပါဘုရား။ သက်ရှိဘုရားဆိုတာ… သားသမီးတိုင်းကို ဝမ်းနဲ့လွယ်မွေး နို့ချိုတိုက်ကျွေးခဲ့သည့်အမေနှင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သည်ဟု မညည်းမငြူဆူပဲ လုပ်ကျွေးပြုစုခဲ့သည့် အဖေသည် သက်ရှိဘုရား တစ်ဆူပဲကွယ့်။ တင်ပါဘုရား။ မိဘနှစ်ပါးက သားသမီးတို့အတွက် အမြဲတမ်း အဓိကထား ယုယခဲ့သလို၊သားသမီးတိုင်းကလည်းမိဘနှစ်ပါးကို သက်ရှိဘုရားတစ်ဆူလို ရိုသေ ကိုင်းရှိုင်းရမယ် ဆိုတာ မှတ်သားထားကွယ့်။ တင်ပါ့ မှတ်သားထားပါ့မယ် ဘုရား။ မိဘနှစ်ပါးက… သားသမီးတို့အတွက် ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘဝမှ စ၍ နေရေး ထိုင်ရေး၊ ဝတ်ရေး စားရေးမှ … Read more
လဆန်းစနေ လပြည့်စနေ ထူးခြားသည့် သတင်းကျွတ်လတွင် ရွတ်ဆိုရမည့် ဂါထာတော် သီတင်းကျွတ် လဆန်း စနေလပြည့်စနေ လကွယ် စနေ ဖြစ်သည် ဒိဝါတပတိ ဂါထာ သဗ္ဗဇယ မင်္ဂလ ဂါထာ ဒိဝါ တပတိ အာဒိစ်စော၊ ရတ်တိမာ ဘာတိ စန်ဒိမာ။ သန္နဒ္ဓေါ ခတ္တိယော တပတိ၊ စျာယီ တပတိ ဗြာဟ္မဏော။ အထ သဗ္ဗ မဟောရတ္တိံ၊ ဗုဒ္ဓေါ တပတိ တေဇသာ။ တာဒိသံ တဇေသမ်ပန်နံ၊ ဗုဒ်ဓံ ဝန်ဒာမိ အာဒရံ။ နမက္ကာရာနုဘာဝေန၊ သဗ္ဗေ ပူရေန္တု သင်္ကပ္ပါ။ ( မှန်ကန်တိကျစွာ အသံထွက်နည်း ) ဒိဝါတပတိ အာဒိတ်စော၊ ရတ်တိမာ ဘာတိ စန်ဒိမာ။ သန်နတ်ဓော ခတ်တိယော … Read more
ချမ်းသာချင်ရင် ငွေမစုပါနှဲ့(ချမ်းသာချင်သူတိုင်းဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ) ပိုက်ဆံစုရင်ချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကိုတော့ ကျနော် ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ပါတယ် ပိုက်ဆံကို ကြိုးစားပမ်းစားရှာ ရှာပီးတာနဲ့အသေအလဲစုဘဏ်မှာပဲစုစု လက်ထဲမှာပဲစုစုအချိန်တန် အဲ့စုထားတဲ့ငွေတန်ဖိုးက လျော့ကျလာမှာပါ ကုန်စျေးနှုန်းတွေကလဲမြင့်တက်လာနေအုံးမှာပဲမိတ်ဆွေ ငယ်ငယ်က ငွေ ၁သောင်းဟာ သိပ်တန်ဖိုးကြီးပါတယ် ခုချိန်မှာတော့ ငွေ ၁သောင်းဟာ ဘာမှမပြောပလောက်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါပြီကျနော်တို့ငယ်ငယ်တုံးက ဇီးထုပ်တထုပ်မှ ၁ကျပ် ငွေ၁၀ရှိရင် ဗိုက်ကားအောင်စားလို့ရတဲ့အထိ အဖိုးတန်ခဲ့တဲ့ ၁၀တန်ဟာလဲ ခုဆို ဘယ်သူမှမယူတော့တဲ့ပိုက်ဆံဖြစ်နေပါပြီသီလရှင်ကိုတောင်လောင်းလို့မရတော့ပါဘူးတန်ဖိုးတွေလဲလျော့ကျသွားပါပြီမိတ်ဆွေတို့ ကလေးနောင်ရေး အတွက် ဘဏ်မှာ တလ၃သောင်းစီဖြစ်ဖြစ် ပုံမှန်စုထားတဲ့ငွေဟာလည်း တချိန်ငွေကြေးဖောင်းပွလာမှု ကုန်စျေးနှုန်းမြင့်တက်လာမှုတွေရဲ့ မိုးကြိုးပစ်မှုကို ဘဏ်မှာစုတာအတိုးရတယ်ကွဆိုတဲ့ ထန်းလက်သေးသေးလေးနဲ့ ကာနိုင်မယ်ထင်ပါသလား? အမှန်တကယ်က ချမ်းသာချင်ရင် ပိုက်ဆံကိုသုံးရမှာပါ ငွေကိုအသေမထားပဲ ငွေနဲ့ငွေ မိတ်ဆွေဖွဲ့ခိုင်းရပါလိမ့်မယ် ဒါမှသာ တိုးပွားမှုရှိလာနိုင်မှာပါ ပိုက်ဆံသုံးတဲ့နေရာမှာ ဦးနှောက်လေးပါ တွဲသုံးရင် ပိုမြန်ဆန်ပါလိမ့်မယ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ ပြောရရင် အဝတ်အစားတွေဝယ်ဖို့ … Read more